Tag: kordhin beddelaad »Bogga 2 ee 2» Martech Zone
Tag: kordhin beddelaad
7 Siyaabood oo Loogu Wanaajiyo Macaamiishaada Beddelka Suuqgeynta Internetka
Isniin, February 1, 2016 Isniin, February 1, 2016 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Dad badan oo suuqley ah ayaa si aad ah uga walaacsan kordhinta taraafikada goobahooda halkii ay ka beddeli lahaayeen taraafikada ay hayaan. Soo-booqdeyaasha ayaa soo gaaraya goobtaada maalin kasta iyo maalin kasta. Way yaqaaniin badeecadaada, waxay leeyihiin miisaaniyad, waxayna diyaar u yihiin inay iibsadaan… laakiin adigu kuma kallifaysid bixinta ay u baahan yihiin inay beddelaan. Tilmaamahan, Brian Downard ee Eliv8 wuxuu ku tusayaa adiga talaabo talaabo ah sida loo dhiso mashiin suuq geyn otomaatig ah oo aad awoodid
AddThis waxay kudareysaa Bartilmaameedka Shakhsi ahaaneed si loo wanaajiyo kaqeybgalka, Is-beddelka iyo Dakhliga
Khamiista, Diseembar 4, 2014 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Inta badan adduunka tiknoolajiyada suuqgeynta ayaa diiradda lagu saarayaa booqashooyinka. Xiriirinta isku xirnaanta ayaa ka baxsan jaantusyada waxayna keeneysaa natiijooyin xun oo loogu talagalay suuqleyda. U helida qof goobtaada runti waa fududahay, laakiin ku haynta halkaas oo runtii ku dhiirigalinaysa inay ganacsi kula yeeshaan waa arrin aad u adag. Xitaa daabacaadda sida kuweenna oo kale, kordhinta daawadayaasheenna waa muhiim - laakiin ilaa ay dadku la falgalaan noocyada aan ka hadlayno, waa
Sidee Ganacsigaagu ugu rogi karaa booqdayaasha Websaydhada aan la aqoon Hoggaamiyayaal
Isniin, Oktoobar 13, 2014 Talaado, Juun 16, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 1 daqiiqadii Sanadkii la soo dhaafay, waxaan tijaabinay xalal kala duwan oo loogu talagalay macaamiisheenna B2B si aan si sax ah u aqoonsanno booqdayaasha websaydhka. Dadku waxay booqanayaan goobtaada maalin kasta - macaamiisha, hogaamiyaasha, tartamayaasha, iyo xitaa warbaahinta - laakiin falanqaynta caadiga ah kama bixiso aragti ku saabsan ganacsiyadaas. Mar kasta oo qof soo booqdo websaydhkaaga, meesha uu ku yaal ayaa lagu garan karaa cinwaankooda IP. Cinwaanka IP-ga waxaa lagu soo ururin karaa xalalka dhinac saddexaad, aqoonsiga lagu lifaaqay, iyo macluumaadka loo gudbiyo
Suuqgeynta Lafilayo: Maxay Tahay Inaad Ula Jaanqaado Qaybta Nooca Kala Shaqeynta & Warbixinta
Khamiis, Juun 19, 2014 Garsoore Graham
Waqtiga Akhrinta: 4 daqiiqo Iyada oo xaddiga sare ee xogta lagu abuuray kanaallo badan oo suuq-geyn ah, magacyada ayaa lagu xujeeyay inay abaabulaan oo ay firfircoonaan xogta saxda ah ee xogta si loo kordhiyo waxqabadka kanaalka iskutallaabta. Si aad si fiican u fahamto bartilmaameedkaaga bartilmaameedka, wad wadid iibsiyo badan, oo aad u yareyso qashinka suuqgeynta, waxaad u baahan tahay inaad la jaanqaado qaybtaada astaanta ah ee ku shaqeysa dijitaalka iyo warbixinta Waa inaad isku waafajisaa sababta ay wax ugu iibsanayaan kuwa iibsada (qaybta dhagaystayaasha) iyo waxa (waayo-aragnimo) iyo sida (firfircoonida dijitaalka ah) sidaa darteed dhammaantood
Fiidiyowyada Degitaanku Waxay Kordhinayaan Is-beddelka 130%
Axad, Juun 13, 2010 Axad, Juun 27, 2014 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Horey waxaa uhelay tirokoobyo qasab ah in fiidiyowga uu kordhiyo sicirka ku-beddelka emayllada 200% ilaa 300%. Fiidiyowgu wuxuu bilaabmayaa inuu door weyn ka ciyaaro dhammaan kanaallada suuqgeynta. Imavex waa shirkad horumarineed oo shabakadeed oo loogu magac daray mid ka mid ah shirkadaha ugu sareeya ee suuq geynta mashiinka raadinta dalka. Waxaan la hadlayey Ryan Mull oo uu xusay inay ogaadeen horumar muuqda oo ku yimid macaamiishooda heerarka beddelka mushaharka ee guji mar kasta oo ay ku jiraan tayo sare
Categories Select Category Adtech Falanqaynta & Tijaabada Content Suuq Data Ganacsiga iyo Tafaariiqda Email Marketing Teknolojiyada soo ifbaxaya Suuq geynta Fiidiyowyada Suuqgeynta & Iibka Buugaagta Suuqgeynta Dhacdooyinka Suuqgeynta Macluumaadka Suuqgeynta Aaladda Suuqgeynta Tababarka Suuq geynta Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinka Xiriirka Dadweynaha Kordhinta Iibka Suuq Goobid Media Social Suuq
Ravi Chalaka: U Wareejinta Iibinta iyo Suuqgeynta Shirarka Farsamooyinka iyo Kulamada
In this Martech Zone Wareysi, waxaan lahadleynaa Ravi Chalaka, madaxa sarkaalka suuq geynta iyo VP ee suuqgeynta wax soo saarka Jifflenow, oo ah aaladda isukeenista kulanka. Maaddaama shirkaduhu joojiyeen shirarkoodii iyo shirarkoodii shaqsiyeed, isla markaana ay u wareejiyeen iibintoodii iyo kooxihii suuqgeynta inay ka shaqeeyaan guryahooda, waxay ku khasbanaadeen inay ka gudbaan tiro caqabado ah. Laga soo bilaabo isdhexgalka fiidiyowga video
Katie Mares: Sidee Noocyadu u dhageysan karaan ugana jawaabi karaan Macaamiishooda ugu saameynta badan ... Haweenka
In this Martech Zone Wareysiga, waxaan lahadleynaa Katie Mares, oo ah qoraa kasbatay Ganacsigeeda: Ahmiyadda ay leedahay inlagu tolo Khibradaada Nooca ah Macaamilka Dumarka. In kasta oo dhaqdhaqaaqa haweenku dhexgalo adduunkeenna bulsheed dadkuna ku wacdiyaan awoodda gabadha, Katie waxay aragtay in fekerkani uusan dhex gelin calaamadaha ganacsiga ama waayo-aragnimada ganacsiyada…
Torchlite: Suuqa loogu talagalay Iibinta Ganacsiga Yaryar ee Muhiimka ah "Flexperts"
In this Martech Zone Wareysi, waxaan wareysaneynaa Susan Marshall, aasaasaha iyo agaasimaha guud ee Torchlite. Susan waxay la wadaagtaa iskaashiga ururka waxayna diirada saareysaa taageerida ganacsiyada yar yar fulintooda iyo taageeridooda Istaraatiijiyada Aasaasiga ah. Waxyaabaha Aasaasiga ah ee Salesforce waa CRM oo si gaar ah loogu talagalay ganacsiyada yaryar ee ka imanaya Salesforce. Qaabka dhabta ah ee 'Salesforce fashion', barxada waxaa loo qaabeyn karaa…
PHP iyo SQL: Xisaabi ama Su'aal Masaafada udhaxeysa Dhibcaha Latitude iyo Longitude
Bishan waxaan xoogaa barnaamij ah ka diyaariyey PHP iyo MySQL marka loo eego GIS. Ku foorarsiga shabaqa ...
Hubi Liisaska Suuqgeynta Emailkaaga ee Khadka tooska ah: Sababta, Sidee, iyo Halkee
Sida loo qiimeeyo loona helo adeegyada xaqiijinta emaylka ugu wanaagsan shabakadda. Waa kuwan liistada faahfaahsan ee bixiyeyaasha sida ...